छाता भाँचिएको सपनी - भाग १ - Samachar PatiSamachar Pati
छाता भाँचिएको सपनी – भाग १
पात्र : मुना, मदन,साथि (प्रमिस), अन्य
साउने झरि त्यस्तै ४ बजेको थियो, पानी पनि परिरहेको थियो, मदनको पनि छिट्टै निस्किने काम परेको थियो तर छाता थिएन, सुनाउँदै भन्यो- छाता छैन आज रुझिने भैयो, मदन र मुना एउटै अफिसमा काम गर्थे ! मुनाले मुस्कुराउँदै भनिन – छाता मेरो झोलामा छ लैजानु, मदन पनि खुसि हुँदै उनको झोलाबाट छाता झिकेर सरासर आफ्नो बाटो लाग्यो। अलि पर गएर ओतमा बसिरहेको थियो, मुना रुझ्दै आईरहेको देखेपछि मदनको मन खिन्न भयो अनि उसले मुनाको नजिक गएर भन्यो: लिनु हजुरको छाता, मुनाले भनिन – नाई हजुरले ओडेर जानु भन्दै उनि गाडिमा चडेर गइन! उनि गाडिमा जानिलाई छाता नचाईएला, मदनले सोच्यो, उ हिँडेर जानुपर्नि भएकोले छाता ओडेर सरासर घर तर्फ लाग्यो। खाजा खाईसकेपछि मदनकि आमाले उसलाई सामान किन्न बजार पठाउनु भयो, मदन त्यहि छाता ओडेर पसल गयो, पानी पर्ने क्रम जारि नै थियो, उनको छाता भाँचिन्छ कि भनेर मदनले जतन गरेर ओड्यो, मदनको घरमा सबैजना खाना खाएर सुत्ने तरखरमा थिए तर किन किन मदनलाई छिट्टै निद्रा लागेन, उनको सहयोगि भावना र मिठो स्वोरले मदन भित्रभित्र मोहित भएछ । मदन उनिलाई सोच्दा सोच्दै निदायो तर अचानक त्यो रातको सपनिमा उनको छाता भाँचिएको देख्यो, मदन बिहानपाखा बिउझिँए पछि उनको छाता हेर्न गयो तर छाता त सकुसलनै थियो, छाता त सपना मा मात्र भाँचिएको थियो ।
सधैझैँ, मदन पनि अफिसको लागि निस्कियो, उसको एउटा मिल्ने साथि `प्रमिस´ थियो। उनिहरु सँङ्गै अफिस जान्थे, उनिहरु बिच भएको सबै कुरा एकअर्कालाई बताउँथे, मदनले पनि आफ्नो सबै घटना प्रमिसलाई बतायो, कुरा पनि अचम्मकै थियो! एकछिन त प्रमिसले हाँसेरै उडायो, अनि भन्यो- तैँले मुनालाई आफ्नो बनाएर देखाई भनेर मदनसँग बाजि समेत गर्यो, ” चोखो मनले कसैलाई माया गरेपछि, उसको माया जसरि पनि पाईन्छ” मदनले भन्यो । उनिहरु गफ गर्दा गर्दै अफिसमा गए, मुना पनि एकछिन पछि आईन , सबै आआफ्नो कामतिर लागे! दिउसो को खाजा खाने समय भएपछि अफिसका सबै स्टाफ एकैठाउँमा थिए जसमा मुना र मदन एकार्काको छेउमा थिए, मदनले कुरा निकाल्यो : मुना मिसको छाता हिजो लिएर गको त हजुरको मात्र याद आयो किन हो ? मदनले मुनालाई सोध्यो ।
मुनाले लजाउँदै भनिन, “त्यसोभए त्यो छाता हजुर आफैले राख्याभए नि हुन्थ्यो नि” ! मदनले जवाफ फर्कायो ” एकदिन लग्दा त यस्तो भयो झन सँधै भरि राख्दा त हजुरकै यादले सताउला नि, मुना खिसिक्क हाँसिन ! उनिहरु चिया पिउंदै थिए, गफ गर्दागर्दा उनिहरुको चिया पनि साटिएछ, दुबैले एक अर्काको जुठो खाए, चिया साटिएको कुरा मदनलाई मात्र थाहा थियो तर मुनालाई थाहा थिएन, यसरिनै मदन चाहिँ भित्रभित्र मुनालाई मन पराउन थालेको थियो, उनिहरु फेसबूकमा साथि पनि बनिसकेका थिए, एकरातको कुरा हो, मुना र मदन फेसबूकमा च्याट गर्न थाले, मदनले पनि कुरा घुमाईफिराई उसले कसैलाई माया गर्ने तर उनिलाई नभनेको कुरा बतायो, मुनाले त्यसको जवाफमा: चाँडै भन्नु, भन्न ढिला नगर्नु भनिन ! त्यसपछि मदनले फेरि सोध्यो : उनले मलाई मन पराउलिम त ? हजुरलाई मैले पनि मन पराउँछु, मुनाको जवाफ आयो ! मदनको खुसिको सिमा रहेन । जसलाई मदनले चाहन्थ्यो, उसले पनि मदनलाई माया गर्थिन, उनि मुना थिइन !
यसरि छाता बाट सुरु भएको उनिहरुको प्रेम, तर सपनिमा छाता भाँचिनुको रहस्य पनि केई होला त्यो कथाको अन्त्यमा थाहा होला ! दिन बित्दै गयो, उनिहरुको माया पनि बढ्दै गयो, सँङ्गै हुँदा होस या टाढा हुँदा होस, मदनले मुनाको एकदम ख्याल गर्थ्यो । सँङ्गै हुँदा त झन मदनले केई खानेकुरा खान भन्दा पहिले मुनालाई सम्झिन्थ्यो ,मदनले मुनालाई सोध्ने गर्थ्यो : हजुरले मलाई बिचमै छोड्नु त हुन्न नि ? मुनाले भन्नि गर्थिन : हजुरको मन सफा छ, यति राम्रो मान्छेलाई छोड्यो भने त पाप लाग्छ मलाई! दुबैले एक अर्कालाई तपाई नै भन्ने गर्थे, जिन्दगि एकअर्काको विश्वासमा अडिएको हुन्छ भनेझैँ, मदन अनि मुनाले एक अर्कालाई एकदम विश्वास गर्ने गर्थे । मदनको साथि प्रमिसले भन्ने गर्थ्यो – धेरै मुना मुना नभन कसैको मनमा कोइ पस्न सकिन्न, यति धेरै विश्वास पनि नगर ,एकदिन छोडेर गईन भने के गर्छस ? मदनले कसैको कुरा सुन्ने थिएन , त्यस्तो बेलामा मदन मात्र होइन कोई पनि सुन्दैनथ्यो अरुको कुरा ।
लेखक: प्रदिप देवकोटा !
भाग २ को प्रतिक्षा गर्नुहोस ……………..।
पोखराको लेकसाइडमा १४ बर्षीय बालकको घाटी रेटेर हत्या
युआरएल पत्रकारिता पुरस्कार प्रतिभा छनोट समिति गठन
पोउवा संघको राहत कोषमा ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी संकलन